Qalisa ukusebenza ngemuva kweholide unyaka we-Ox
Namuhla usuku lokuqala lokusebenza ngemuva kweholide loNyaka Omusha we-Ox. Usuku lokuqala lokwakha lube wusuku olujabulisayo kubo bonke ozakwethu ukukhokha imikhonzo kaNcibijane. Ekuseni, safika eToilet Seat Cover- production Centre sijabule, sangena endaweni yehhovisi. Lokho esikubonile futhi ...Funda kabanzi »
Ukubingelela Konyaka Omusha WamaShayina- Imikhiqizo Yephepha LeZhonghe
Kumakhasimende ethu ayigugu: Sithanda ukuthatha leli thuba ukudlulisa ukubonga kwethu okuqotho ngosizo lwakho oluyigugu kulo nyaka oyinselele. Impumelelo yethu ibingenakwenzeka ngaphandle kokubambisana okubalulekile esinakho nebhizinisi lakho kanye nobudlelwano bethu obuyigugu nomunye nomunye wethu ...Funda kabanzi »
Siyakwamukela amakhasimende ukuvakashela imboni yethu futhi aqondise umsebenzi wethu
Namukelekile amakhasimende ukuvakashela ifektri yethu futhi aqondise umsebenzi wethu NgoJanuwari 27, abaholi bohulumeni basekhaya kanye nosihlalo webhodi labaqondisi bamakhasimende abalulekile bavakashele inkampani yethu ukuvakashela abasebenzi bezokukhiqiza abaphambili abahlala benamathela emisebenzini yabo, futhi egameni lamakhasimende, e ...Funda kabanzi »
NJENGOMUNTU OYENZA IPHEPHA, KUNGANI USIKHETHA?
* IMPILO NOKUPHEPHA Kugwema ukukhula kwamagciwane, kuqeda ukungcoliswa okuphambene futhi kusize ekugwemeni ukungaphatheki kahle kwengqondo okudalwa ukuthinta ngqo ikhava yesihlalo yangasese. * 100% WASHABLE Sebenzisa izinto ezibolayo. Amanzi ancibilikayo. Isembozo sephepha lendlu yangasese sephepha singasuswa ngemuva kokusetshenziswa. * FOL ...Funda kabanzi »
Umkhiqizo Wobunono- Ikhava Yesitulo Sezindlu Zangasese
Songa ikhava yesihlalo sendlu yangasese - Uhlobo olulodwa lwephepha lekhava yesihlalo yangasese elincibilikayo ukuncibilika kwamanzi, akukho ukukhathazeka I-pulp yokuqala yokhuni inokuncibilika kwamanzi okuhle okungelula ukuvimba indlu yangasese Usayizi ofanele ukugwema ukungakhululeki kwesikhumba ...Funda kabanzi »
Las vacaciones del día de a ño nuevo no han terminado, hoy convocamos a los Jefes de Departamento de productción ya los altos directivos para celebrar un importante seminario.Examinar y aplicar los planes y medidas de la estrategia y el plan de desarrollo de la empresa para 2021. IDebido a laxp ...Funda kabanzi »
Ingqungquthela yokuqala yeSemina yemakethe yezembozo zezihlalo zangasese
Ngaphambi kokuphela kweholide likaNcibijane, sihlanganise abaphathi bezokukhiqiza neminye iminyango nabaphathi abaphakathi nabaphezulu ukuba babambe umhlangano obalulekile namuhla. Xoxa futhi usebenzise amasu nezenzo ezahlukahlukene zecebo lenkampani necebo lokuthuthukisa ngo-2021. Ngenxa ...Funda kabanzi »
Umshini wokusika ngesivinini esiphezulu wokwenza iphepha emaphethelweni lihleleke futhi libushelelezi
Imikhiqizo yephepha le-Fengcheng Zhonghe yethule umshini we-slitting othomathikhi wokunquma umphetho wephepha, okungenza iphepha lephepha le-roll nephepha lishidi lihle. Yize izindleko zephepha ziphakeme kancane kunakuqala ngenxa yenqubo eyodwa yokukhiqiza, ikhava yesihlalo sendlu yangasese ngemuva kokwehla komphetho kunguku ...Funda kabanzi »
Isifinyezo sokusebenza 2020, Ukulindela Okusha kwe-2021
Ngokungazelelwe, i-2020 izophela. Kulo nyaka, umuzwa womzabalazo ugcwalisa amehlo ethu ngezinyembezi, futhi umoya womzabalazo wakha umgogodla wesizwe. Akunandaba ukuthi sike sabhekana nani, kungukuhlangenwe nakho nokukhula iminyaka esinikeze khona. Kufanele sigcwele i-grati ...Funda kabanzi »
Ukucwaningwa Kokuzibophezela Komphakathi
IFengcheng Zhonghe Paper Products iphasise iSocial Responsibility Audit ehlelwe yiBureau Veritas ngo-2020 futhi. Ngalolu cwaningo, izinzuzo zethu zokuphatha zaqiniswa ngokuphelele, kepha okunye okutholakele kusadinga ukuthi sithuthukise futhi sithuthukise.Funda kabanzi »
I-Zhonghe Paper Yethula iwebhusayithi yakamuva, iqinisa ikhwalithi nensizakalo yethu
Imikhiqizo yephepha le-Fengcheng Zhonghe liyaziqhenya ngokunikela ngemikhiqizo ehlukahlukene enezidingo zakho. Imikhiqizo yethu kanye nezinsizakalo kubandakanya ikhava yesihlalo yangasese, izicubu zephepha, amathawula wephepha, napkin yamaphepha, izisetshenziswa zamaphepha, iphepha langasese kanye namathuluzi wokugcina izingane. Sihlukile njengendawo yemakethe ku ...Funda kabanzi »
Hlanganisa Amandla Eqembu Futhi Uqhakaze Intsha Nobungqabavu - 2020 Ukuqeqeshwa Okuboshwe Ngaphandle
Edolobheni elinomsindo Nsuku zonke ekhaya nasemsebenzini Ukusebenza impilo kuyadina. Woza, umoya wasekwindla wawusha. Masiphumele ngaphandle, sifake ubumnandi empilweni. Ngesikhathi salokhu kunwetshwa, sidlale izinhlobo eziningi zemidlalo yamaqembu, kepha okuhehe kakhulu bekuwumdlalo we "peo ekhuthazayo ...Funda kabanzi »